Etu ị ga-esi kpoo onye nrụrụ, Blogger, ma ọ bụ onye nta akụkọ | Martech Zone
Etu ị ga-esi kpughee mmetụta gị, Blogger, ma ọ bụ onye nta akụkọ
Thursday, August 13, 2020 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
N'oge gara aga, edere m banyere ya Etu esi eme ka ịde blọgụ. Saga ahụ na-aga n'ihu ka m na-enweta ngwụcha ngwụcha nke ọrụ mmekọrịta ọha na eze na-akwadoghị ndị enweghị ozi m chọrọ iji kwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa ha.
O were obere oge iji nweta ọkwa nke kwesịrị igosi. Enwetara m email site na onye na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta na Supercool Okike. Supercool bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe pụrụ iche nke na-ahụ maka ịdepụta ihe na vidiyo vidiyo n'ịntanetị, ịre ahịa azụmaahịa, ịgha mkpụrụ vidio, mgbasa ozi mgbasa ozi agbakwunyere, vidio vidio, ihe ngosi akpọrọ na webisodes Nke a bụ email dị egwu!
Akụkụ nke Nnukwu Blog Pitch
Ọgba ahụ bụ ahaziri. Ana m enweta otu blanket cut na mado. M na-ehichapụ ọkwa ndị ahụ ozugbo. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmụ onye m bụ, gịnị kpatara m ga-eji na-ege gị ntị?
Ọdụ ahụ nkenke na-agwa m ozi ahụ. Imirikiti ndị PR na-ebipụ naanị na mado mwepụta nkwupụta nzuzu n'ime ahụ email ahụ.
The pitch na-enye m a quote ịbanye ozugbo na blog post m!
Oghere ahụ nwere njikọ na akụkọ ahụ (na ebe m nwere ike ịkọwa ma zoo ndị ọbịa m).
The pitch agwa m ụzọ dị iche iche Enwere m ike iji ozi ahụ mee ihe! Nke a bụ mgbe anya mmiri gbara m… Cheedị na… iji chekwaa m oge, Darci echeworị echiche otu m ga - esi mee ihe ọ bụla… wee tinye ederede iji kpọtụrụ ya ma ọ bụrụ na m nwere ajụjụ ọ bụla.
The pitch na-enye ndabere na ọkachamara na ihe mere o ji dị mkpa iji gee ntị.
The pitch na-emechi na Darci si aha, aha, na ụlọ ọrụ (nke m ọbụna leliri anya!)
The pitch nwere otu họrọ ọpụpụ! Ndị ọrụ PR na-eziga ịkpụ na mado ozi ịntanetị na Outlook - a direct mmebi nke omume CAN-SPAM.
Nke a bụ email-zuru oke zuru oke… M ga-atụle ya siri ike B +. Naanị obere ihe ọmụma na-efu bụ mkpọda nke m na-echeghị na ọtụtụ ndị fol ga-elebara anya ị ga - ewe - mana ọ ga - adị mma ịnụ ihe kpatara ọ ga - eji dịrị ndị na - ege m ntị. Okwu ole na ole dị na email dị ka
Achọpụtara m Martech Zone ekwuola banyere vidiyo na mgbasa ozi mgbasa ozi n'oge gara aga, yabụ echere m na nke a ga-amasị gị…
Tags: ịde blọgụotú pitchotu esi ede blọgụesi etu onye nta akukootu esi eme ka influencerodeakụkọ pitchpitchpọd influencersupercool okikeOnyeka Onwenu
Jun 16, 2011 na 7:44 AM
Daalụ maka ịkekọrịta nke a - ihe na-atọ ụtọ. Dị ka onye na-anọdụ na ngere PR, yana dị ka onye na - ede blọgụ n'onwe m (ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa iji dọọ!), Ọ ga - enyere aka ịhụ ụdị ọkwa ndị na - arụ ọrụ. Nnukwu ohere mmụta, daalụ!
Otu ihe o juru m anya bụ ezie bụ isi 5. M na-agba obere PR / Marketing dị ka ọrụ ụbọchị m, ma na-anata ụdị ọkwa a mgbe ụfọdụ (na-adịkarịghị, mee ha).
N'ime ihe m mere, enwebeghị m ike ịgụnye ụdị ozi dị na isi nke 5, n'ihi na echere m na ndị m kuru nwere ike iche maka ihe ndị a maka onwe ha - achọghị m ịgwa ha otu ịrụ ọrụ ha (n'otu aka ahụ ana m ewe iwe mgbe ndị mmadụ na-eme m ihe ahụ).
Agbanyeghị, ọkwa gị na-eme ka m chegharịa n’ọnọdụ ahụ!
Ekwenyesiri m ike na ịhazi onwe - ọ dị ezigbo mkpa tụlere njikọ njikọta nke ọrụ 'ọgbara ọhụrụ'.
Ya mere, na-ekele ọzọ!
Jun 16, 2011 na 12: 41 PM
Ana m ewere echiche dị iche ebe a. Kedu ihe dị na vidiyo vidiyo ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị metụtara gị ma ọ bụ Blog Tech blog? # 1 ọ bụghị "ahaziri ya" n'aka na ọ nwere aha gị na ya mana onye na-enweta ya ma nwee ya mbubata na email (echere m na onye were gị n'ọrụ dị mma na nke ahụ) # 5 Ekwenyere m na onye na-emekọrịta mmekọrịta kpamkpam banyere itinyeghị na Ama na, ị kwesịrị ịmara ụzọ kasị mma iji ihe ọmụma gị na-ege ntị ma njikọ a tweet bụ a mma echiche. Ọ bụ naanị n'ihi na ọtụtụ mmiri ndị ọzọ na-amị amị anaghị eme nke a, ọ na - eme ka ọ ghara ịmịcha ndị ọzọ. Onyinye a ga-aka mma ịgakwuru onye nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'echiche m.
Dika onye obula na azuputa onwe ya dika ihe ojoo obula gh’eme ka m ghara inwe ntụkwasị obi n’ebe m no (ma eleghi anya o nwetara nchoputa na nku anya iji okwu ahu eme ihe)
Jun 17, 2011 na 3: 26 PM
Ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ire ahịa dị n’aka, Chris. M ga-arụ ụka na ọ bụ ahịa nke butere Obama n'ọfịs. Ndị ntuli aka riri 'mkpọsa' nke olileanya na mgbanwe ya. Ojiji ndị na-eso ụzọ ya na ndị na-eme ihe ike bụ ihe ịtụnanya, n'ezie otu mgbọrọgwụ ahịhịa. RE: # 1, achọrọ m ikwenye gị. My okwu bụ na Darci bịara n'ezie lelee anyị n'ihu pitching… ihe ọtụtụ ogbe na gbawara PR sịrị anaghị eme.
Ọkt 16, 2014 na 7:22 PM
Doug, kedu ka ị ga-esi kwado onye mepụtara njikọ pụọ na email mgbe edere ya maka naanị otu onye (blogger ma ọ bụ odeakụkọ) wee zigara ya otu onye ma ejikọtaghị ya na ndepụta na usoro ịre ahịa email?
Imirikiti ndị ọrụ iwu legit anaghị eziga ọkwa ọnụọgụ email yabụ amaghị m otu esi apụ apụ. N'ụzọ doro anya, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ debanyere aha gị na ozi ịntanetị ya (na-enweghị ịbanye na ya), nke ahụ bụ akụkọ dị iche.
Ọkt 16, 2014 na 7:53 PM
Ndewo Carri! N'ezie ọtụtụ ndị legit PR folks na-eziga ozi ịntanetị. Imirikiti nyiwe PR na-enye gị ohere ịhọrọ ndị nta akụkọ gị niile na ndị na-ede blọgụ wee zipụ. Fọdụ, dị ka Meltwater (onye nkwado) nwere atụmatụ wepu aha na ha n'elu ikpo okwu mana ọtụtụ ndị ọzọ anaghị. Ọ bụrụ na ị nweghị mmekọrịta azụmahịa, ị ga-achọ mmemme ga-abanye na ịpụ apụ. Outlook na Gmail adịghị ebipụ ya. Echere m na otu ụzọ ga-abụ iji ngwá ọrụ dịka Formstack ma nwee ndị folks dejupụtara n'ụdị (ma ọ bụ adị Google na mpempe akwụkwọ)… mana nke ahụ siri ike idobe.